အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေက လူတွေရဲ့စိတ်ကိုဘယ်လိုပြောင်းလဲပေးနိုင်လဲ ? -
အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေက လူတွေရဲ့စိတ်ကိုဘယ်လိုပြောင်းလဲပေးနိုင်လဲ ?
အိမမြှေးအလှမှေး တိရိဈဆာနလြေးတှကေ လူတှကေို အကွိုးပှုလာတာ လှနခြဲ့တဲ့ နှဈပေါငြးမွားစှာကတညြးပါ။ အပေါငြးအဖောအြဖှဈရှိလာပေးတဲ့ အိမမြှေးတိရဈဆာနတြှကှေောင့ြ လူတှရေဲ့ စိတကြို ပွောရြှှငကြှညနြူးစတောကတော့ ငှငြးလို့မရတဲ့အခကွပြါ။ ခှေးလေးတှေ၊ ကှောငလြေးတှေ၊ ငှကကြလေးတှေ၊ ငါးအလှလေးတှကေ လူတှေ အမှေးမွားတဲ့ Pets လေးတှပေါပဲ။
သူတို့က ကမွတို့လူသားတှကေို ဘယလြိုအကွိုးပှုနသလေဲ ကှည့ရြအောငြ….
လူတှကေ စိတထြှကပြေါကမြရှိတော့တဲ့အခွိနြ၊ အနားမှာ ဘယသြူ့မှမရှိတော့တဲ့အခွိနမြှာ အရမြးအထီးကနွတြာမွိုး၊ရငဖြှင့တြိုငပြငစြရာ မရှိတော့တဲ့အခါစိတကြရွောဂါလို့ခေါတြဲ့ Depressionကိုခံစားရပါတယြ။ နိုငငြံတောတြောမြွားမွားမှာ စိတကြဝွဒနောသညတြှကေိုအိမမြှေး တိရိဈဆာနလြေးတှနေဲ့ ထိတှေ့စခှငြေးက သူတို့စိတကြို ပွောရြှှငစြပေါတယြ။ Pet လေးတှမှေေးထားရငြ သူတို့ကို ဂရုစိုကနြခှငြေးက ကိုယ့ရြဲ့အထီးကနွစြိတကြို သကသြာစပေါတယြ။ သူတို့က ကိုယ့ကြို အမှဲလိုအပနြတောဖှဈတဲ့အတှကြ ကိုယ့ဘြဝဟာ လဈဟာနသလေိုလဲ မခံစားရတော့ပါဘူး။
အိမမြှေးတိရိဈဆာနကြို အကှောငြးပှုပှီးကိုယပြါ မိတဆြှသေူငယခြငွြးတိုးပါတယြ။ ဥပမာ- ခှေးမှေးထားတော့ညနခငြေးတိုငြး ခှေးကို လမြးလွှောကထြှကပြေးရမယြ။ ဆေးခနြးပှဖို့လိုရငဆြေးခနြးသှားရမယြ။ အဲ့လိုနရောတှကနေေ တခှားခှေးမှေးထားတဲ့သူတှနေဲ့ရငြးနှီးလာမယြ။ မိတဆြှတှဖှေဈေလာမယြ။ တိခစွသြူတို့ အခငွြးခငွြး ပှောစရာ စကားတှတေိုးလာတော့ ကိုယ့ြSocial Network ကှီးလဲ ကယွလြာတာပေါ့။
(3)အသကကြှီးသူ ဖိုးဖိုးဖှားဖှားတှအတှေကြ အဖောမြှနြ
အသကကြှီးလာတာနဲ့ အမွှ အထီးကနွတြဲ့ ဒဏကြို ခံရပါတယြ။ သားသမီးတှကလေဲ အလုပတြှနေဲ့ မအားမလပဖြှဈနတေော့ စကားပှောဖောမြရှိရငြ အဖိုးအဖှားတှဟော တယောကတြညြးဖှဈနတတေပြါတယြ။ တိရိဈဆာနလြေးတှကြေိုအနားမှာရှိတော့အပငွြးလဲပှေ…စိတလြညြး ပွောရြှှငရြတယြ။Video တှထေဲမှာ နိုငငြံခှားဆေးရုံတှမှအေယလြဇြိုငြးမားလူနာတှတေဲ့ အခနြးကိုခှေးလေးတှခေေါခြေါလြာပေးတာ တှေ့ဖူးကှမှာပါ။
Attention deficit hyperactivitydisorder (ADHD) လို့ခေါတြဲ့ စိတအြာရုံစူးစိုကဖြို့ ခကခြဲတဲ့ ရောဂါရှိတဲ့ကလေးတှမှော တိရဈဆာနလြေးတှနေဲ့ ဆော့ကစားစခှငြေးက သူတို့ကနွြးမာရေးကိုအထောကအြကူပှုပါတယြ။ ဒီလိုရောဂါရှိတဲ့ကလေးတှကေို တခွို့သော မိဘ၊ဆှမွေိုးမွားက မသိကှတဲ့အတှကြ ဆူပူကှိမြးမောငြးတာတှလေုပကြှတယြ။ အဲ့အခါ ကလေးစိတထြဲမှာ ဒဏရြာရကှတယြ။ တိရဈဆာနလြေးတှကှေောင့ကြလေးတှကေ ဆော့ကစားရငြး စိတကြိုထိနြးနိုငလြာတယြ။ Pet လေးကို ဂရုစိုကရြငြး ယုံကှညမြှုပိုရှိလာတယြ။
(5) စိတဖြိစီးမှု Stress ကို သကသြာစခှငြေး
စိတညြဈနတေဲ့အခွိနြ၊ ဘယသြူမှစကားမပှောခငွတြဲ့အခါ ကိုယ့ခြှေးလေးတှေ၊ ကှောငလြေးတှကေိုခေါပြှီးဆော့လိုကတြာမွိုးက တကယကြိုStress သကသြာစတောပါ။ ကိုယအြဆငမြပှသမွှေကို ကိုယ့ခြှေးတှေ၊ကှောငတြှကေို ပှောပှရငြး စိတဖြှလေို့ရပါတယြ။ သူတို့တှလေေးက ကိုယ့စြကားကို နားမလညပြမေဲ့ ကိုယစြိတညြဈနလေား ၊ပွောနြလေားဆိုတာတော့ ကောငြးကောငြးနားလညပြါတယြ။
ဒါကှောင့ြ တိရိဈဆာနလြေးတှကေို ခစွပြေးပါ။ သူတို့လေးတှကလေဲ လူတှကေို ကောငြးကွိုးပှုနတောမို့ အပှနအြလှနြ ဂရုစိုကပြေးဖို့ လိုပါတယြ။
❤️𝗛elping 𝗢ur 𝗣eople 𝗘veryday
Hope #hopetelecare #onlinedoctor
health #dogs #petlovers
Oct 26, 2021 Health Tips, Mental Health